Ny tranga iPhone 7 sy 7 Plus dia mifanaraka amin'ny iPhone 8 sy 8 Plus | Vaovao IPhone
Ny fanavaozana nandrasana nandrasana ny iPhone 7 sy 7 Plus dia nahatonga antsika hanana tsiro fambolena. Ny iPhone 8 sy 8 Plus vaovao vitsy dia vitsy ny endrik'izy ireo raha ampitahaintsika amin'ny maodely teo aloha, ny iPhone 7 sy 7 Plus. Ny lamosin'ilay vera no zava-baovao mahavariana nomeny antsika, satria na ny fakantsary roa an'ny iPhone 8 Plus na ny an'ny iPhone 8 dia mbola eo amin'ny toerana mitovy ihany.
Raha mpanangona fonony ianao, toy ny mpamaky anay Ivan Silva avy any Mexico, ary nieritreritra ny hanavao ny fitaovana iPhone 7 na 7 Plus ho an'ny iPhone 8/8 Plus vaovao ianao, azonao antoka fa afaka manohy mankafy ireo fonony rehetra anananao ianao novidina nandritra ny taona lasa tsy nisy olana.
Tao anatin'ny herinandro lasa izay, Apple dia nanomboka nahatadidy fonosana maro loko isan-karazanys, izay mety ho marika mazava fa ny iPhone 8 sy 8 Plus vaovao dia tsy hanohy hampiasa endrika mitovy amin'ny iPhone 6 sy 6 Plus, misy fiovana kely ihany, fa rehefa naseho ireo maodely vaovao dia toa manondro ny zava-drehetra fa ny antony mahatonga ny fampahatsiahivana dia ny fivarotana ambany.
Raha mitsidika ireo tranga vaovao natolotr'i Apple tamin'ny famoahana ny iPhone 8 sy 8 Plus isika, aza hadino ny fotoana iray, dia ho hitantsika ny fomba rehetra Ireo tranga mifanaraka amin'ny iPhone 8 sy 8 Plus dia mifanaraka amin'ny iPhone 7 sy 7 Plus. Amin'ny alàlan'ny Apple Store Online, Apple dia manolotra tranga isan-karazany, miaraka amin'ny famaranana samihafa, fitaovana ... ka raha tsy dia mazava loatra amintsika ny karazana tranga tadiavintsika, mandehandeha mamaky ny magazay Apple dia hiala tokoa isika fisalasalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny tranga IPhone 7 sy 7 Plus dia mifanaraka amin'ny iPhone 8 sy 8 Plus
Heveriko fa tsara izany, satria efa misy karazana, loko ary firafitra maro amin'ny tranga Iphone 7 sy 7 Plus.
Notsapainay ny mpandahateny Bluetooth Aukey SK-S1: tsara, tsara ary mora vidy
Ny fampiharana Clips dia ahafahantsika mamorona seho an-tsary miaraka amin'ny fakantsary TrueDepth an'ny iPhone X